Inkantolo yenze umsebenzi oncomekayo | News24
Inkantolo yenze umsebenzi oncomekayo
INKANTOLO yaKwaMaphumulo iphothule amacala amabili okudlwengula nelilodwa lokubulala, ngeledlule.
Kwicala lokuqala uMnuz Thembelani Mfeka (23) ugwetshwe iminyaka engu-15 ngecala lokubulala ngonyaka odlule endaweni yaseMbitane.
Icala lesibili bekungelika Mnuz Okpara William Khuzwayo (48) ogwetshwe imnyaka engu -12 ngecala lokudlwengula ingane endaweni yaseMaqadini, ngonyaka ka-2013.
Lo mbiko udalulwe esitatimendeni esithunyelwe kwi-Weekly, ngabe-National Prosecuting Authority (NPA).
Kuthiwa udaba oluthinta uMnuz Mfeka lwaqala ngenkathi eya endlini kamufi ukuyocela imali u-R30 ayemkweleta yona.
Ngokusho kwalo mbiko uMufi watshela umsolwa ukuthi akanayo imali ngakho ngeke akwazi ukumukhokhela.
Kubikwa ukuthi umsolwa wahamba wayolanda umese, wagwaza umufi kabili ngaphambi kokuba abaleke.
Umbiko uqhube ngokuthi ummese owasetshenziswa umsolwa watholakala esikhotheni esisondele nalapho okwenzeka khona isigameko.
Kanti ecaleni likaMnuz Khuzwayo, kuthiwa umsolwa wayekade ecele umndeni wengane ukuba ingane izomuhlalisa ebusuku. Kwathi umndeni usuvumile kubikwa ukuthi wayidlwengula, kanti ekuseni ingane yalubika lolu daba okwabe sekwenza ukuba umsolwa aboshwe.
I-NPA izamukelile lezi zigwebo yathi ziqinisekisa ukuthi izinkantolo angeke zimelane nama cala alolu hlobo